कोरोना भाइरस नेपाल: गाउँमा के दु:ख भयो र यी नेपालीका पाइला फेरि ‘कालापहाड’ तर्फ लम्किँदैछन् ? – Sulsule
कोरोना भाइरस नेपाल: गाउँमा के दु:ख भयो र यी नेपालीका पाइला फेरि ‘कालापहाड’ तर्फ लम्किँदैछन् ?
सुलसुले २०७७ भदौ २१ गते १२:२९ मा प्रकाशित
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको त्रासका कारण भारतबाट आफ्नो गाउँठाउँ फर्किएका नेपालीहरू पुनः धमाधम भारत जान थालेका छन्।
जमुनाहा नाकाबाट कालापहाड(भारत) लाग्दै गरेकाहरूको गुनासो छ- गाउँमा माग्दा न ऋण मिल्यो न गरिखाने बाटो नै। न व्यापार व्यवसाय न रोजगारी।
कोरोनाभाइरसको महामारी शुरू भएपछि मर्नुपरे गाउँमै मरौँला भनेर भारतबाट अनेक उपाय अपनाएर आफ्नै गाउँ फर्केका हजारौँ हजार नेपालीको यात्रा फेरि छिमेकी मुलुक भारततर्फै मोडिएको छ।
लालाबालाको शिक्षा र बिहान बेलुकाको हातमुख जोर्ने उपायको सम्भावना उनीहरूले नेपालभन्दा भारततिरै देखेको बताए।
भारतको विभिन्न कम्पनीमा काम गर्दै आएका नेपालीहरू नेपालमा कुनै रोजगारी नपाएको र परिवार पाल्न मुस्किल भएको भन्दै पुनः भारत फर्किन लागेको बताउँछन्।
कसैले यसअघि भारतमा गर्दै आएको व्यापार सञ्चालन गर्न त कसैले पुरानै कम्पनीले काममा बोलाएको भन्दै भारत जान लागेको बताए।
सुर्खेतका विनोद कुमार बिष्टले कोरोनाभाइरसको महामारीकै कारण होटेल व्यवसाय छोडेर दुई महिना अगाडि भारतबाट नेपाल फर्किएको बताए।
अडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,बीबीसी बहस
भारतको गुजरातमा आफैँले सञ्चालन गरेको होटेलमा काम गरिरहेका बिष्ट सुर्खेतका केही कामदारलाई लिएर नेपाल आएको दुई महिनापछि फेरि भारत फर्किन लागेको बताउँछन्।
नेपालगञ्जको जमुनाहा नाका हुँदै भारत जाँदै गरेका बिष्टले भने, “सबै स्टाफहरूलाई घरमा छोड्न आउने बाध्यता भएर आएको थिएँ, अब फेरि गुजरात जाँदैछु, त्यहाँ आफ्नै होटल छ, होटलको भाडा तिर्नु छ, होटलको सरसामान के कस्तो भयो भनेर हेर्न पनि जाँदैछु।”
वातावरण सहज हुँदै गएमा भारतीय कामदार राखेर फेरि उतै होटल सञ्चालन गरेर बस्ने बिष्टले बताए।
यसअघि भारतमै रोजगारी गरेर जीविका चलाउँदै आएका मुगुका विजया कार्की र उनका श्रीमान् पनि पुनः रोजगारीकालागि भारत जान लागेको बताउँछन्।
न रोजगार न व्यापार
“घरमा केही छैन, बच्चा सानै छन्। सधैँ भारतबाट कमाएर ल्याउँदै खाँदै गरेका थियौँ तर लकडाउनले गर्दा ६/७ महिना धान्नै मुस्किल भयो, नेपालमा न रोजगार छ न व्यापार , फेरि कमाइ गर्न भारत जानुपर्ने बाध्यता भयो।” विजयाले भनिन्, “महामारी फैलिएपनि आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्ला, किनकि रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो।”
“ऋण काढेर खाउँ भने पछि कसरी तिर्ने? कमाउँदै खाँदै गर्ने गरिबलाई ऋण पनि कसले दिन्छ र ?” उनले प्रश्न गरिन्।
विजयासँगै भारत जानलागेका उनका श्रीमान् मदन थापाले भारतबाट कुनै कम्पनीले नबोलाए पनि उतै गएर कामको खोजी गर्ने बताए।
“मजदुरी गर्ने भनेर जानलागेको” बताउँदै उनले भने, “शिमलातिर गएर काम खोज्ने हो, पहिले काम गरेको एकजना मालिकलाई चिनेको भरमा काम खोज्न जाँदैछौँ।”
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका बासु शेखले भने लकडाउनको समयमा वृद्ध बाबुआमालाई खेतीपातीमा सघाउन नेपाल आएर फेरि भारत फर्किन लागेको बताए।
भारतमा चाइनिज, पञ्जाबी, जापानी लगायत धेरै किसिमका खानाका परिकार बेच्ने आफ्नै धन्दा रहेको बताउने बासुले परिवार र छोराछोरी सहित वर्षौँदेखि भारतमै बस्दै आएको सुनाए।
उनले भने, “लामो समयसम्म लकडाउनका कारण भारतमा पहिले कमाएको पैसा पनि सकियो। परिवारलाई कि भारतमै केही धन्दा गरेर पाल्नु पर्‍यो, महामारीले गर्दा भारतमा पनि कारोबार नचल्ने जस्तो मानेर सबैलाई नेपाल फर्काएर ल्याउनु पर्ला भनेर जाँदैछु। “
परिवार सहित भारतमा बस्दै आएको बताउने सुर्खेत लाटीकोईलीकी नविना थापा दुईमहिनापछि फेरि भारत फर्किन लागेको बताउँछिन्।
भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्न थालेपछि श्रीमान् र छोरालाई लिएर माइत आएकी नविना छोराको अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएको भन्दै महामारीको उच्च जोखिम हुँदाहुँदै फर्किनु पर्ने बाध्यता भएको बताइन्।
“यता रोजगारी पनि भएन, छोरो कक्षा ९ मा उतै पढ्छ, नेपालमा रोजगार मिल्ने भए त किन अर्काको देश फर्किनु पर्थ्यो र? यतै जीविका चलाएर एउटा सन्तानलाई पढाउन सकिन्थ्यो तर जानै पर्ने बाध्यता भयो।”
आधार कार्डको सहारा
आधार कार्डकै सहारामा फेरि सपरिवार भारत फर्किन लागेको नविनाले बताइन्।
भारतको महाराष्ट्र प्रदेशस्थित सीके विल्डर कम्पनीमा काम गर्दै आएको बताउने दैलेखका केशव कार्कीले पनि ६ महिनापछि भारत फर्किन लागेको बताए।
लकडाउन हुनुभन्दा पहिले गत फागुनमा कम्पनीबाट बिदामा घर आएको बताउँदै उनले भने, “अहिले भारत सरकारले पनि लकडाउन खुकुलो पारेको अवस्था छ, नेपालमा काम खोज्नुभन्दा यसअघि काम गर्दै आएको भारतकै कम्पनीले बोलाएको छ त्यसैले भारततिर जाँदैछु। “
नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा केही दिनदेखि रोजगारीका लागि भारतजानेहरूको भिड देख्न सकिन्छ।
आजभोलि दैनिकजसो १५० देखि २०० सम्म मानिसहरू भारत जाने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले जनाएको छ।
भारतमा रोजगारीका लागि जान चाहने अधिकांशको भारतीय कम्पनीमा काम गरेको परिचय पत्र र आधारकार्ड रहेकोले आधारकार्डकै आधारमा नेपाली कामदारहरूलाई भारत जान दिइरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज प्रहरी नायव निरीक्षक बिष्णु गिरीले जानकारी दिए।(बीबीसी नेपाली सेवाबाट)